'डा. केसीसँग वार्ता हुँदैन, गरिँदैन' : झलनाथ खनाल
‘डा. केसीसँग वार्ता हुँदैन, गरिँदैन’ : झलनाथ खनाल
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका नेता झलनाथ खनालले डा. गोविन्द केसीको अनसनसामू सरकार नझुक्ने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा कुरा गर्दै खनालले यस्तो बताएका हुन् ।
अन्तर्वार्तामा खनालले भनेका छन्, ‘कसलाई के गर्नुपर्छ, त्यो गर्न पाइन्छ । सबै स्वतन्त्र छन् । कति हदसम्म आन्दोलन गर्न मन लाग्छ सबै मान्छे स्वतन्त्र छन् । तर, त्यसबाट के परिणाम निस्कन्छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’
‘कतिपटक वार्ता गर्ने ? विगतमा धेरैपटक वार्ता गरेर सहमति गरेको हो । अहिले पनि सम्झौता अनुसार नै विधेयक ल्याइएको छ’ खनालले थपे, ‘सम्झौतामा भएका कुन अक्षर, रेफ, कान्दानी र बाइमात्रा तलमाथि परेको छ ? सधैँ नयाँ नयाँ मागहरु राखेर हड्ताल र अनसन गरेर हुन्छ ? यसरी देश चलाउन खोजेर त भएन नि । केसीको अनसनसँग सरकार अब झुक्दैन ।’
‘विधेयक पारित भइसक्यो, अब पुनर्विचार हुँदैन । बहुमतको सरकारलाई शासन गर्न नदिने, विधेयक पारित गर्न नदिने नियत हामीले बुझेका छौं। संसद नियम र विधानका आधारमा चल्छ । यो संसारभरको सर्वमान्य नियम हो । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैले जोरजबर्जस्ती गरेर चल्दैन । प्रतिपक्षले बहुमतलाई बलपूर्वक रोक्न खोज्नु राम्रो होइन’ खनालले भने ।
सभामूख कृष्णबहादुर महराको भूमिकाको चौतर्फी विरोध भयो नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा खनालले भने, ‘चौतर्फी विरोध भएको छैन । प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले विरोध गरेको हो । अरु केही मान्छेले पनि विरोध गर्न सक्छन् । यो सामान्य विषय हो ।’
Tagsझलनाथ खनाल नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी पूर्वप्रधानमन्त्री